Ike njide: 2800
Nha Platen (H x V): 860×875
Tie Bars dayameta: 110
Oghere dị n'etiti Tie Bar: 560×560
Elu Elu (nkeji-max): 250-650
DM usoro na-ekpo ọkụ ụlọ anwụ nkedo igwe, Ọ bụ ọhụrụ usoro emepụtara na-adịbeghị anya, na elu na-eri arụmọrụ. Anyị na-enye 400Ton Precision High Pressure Zinc Alloy Hot Chamber Die Casting Machine na akwụkwọ ikike afọ 2. Anyị raara onwe anyị nye ịnwụ igwe nkedo ọtụtụ afọ, na-ekpuchi ahịa Russia, India, South-East Asia na South-America. Anyị na-atụ anya ịbụ onye gị na ya na-akpakọrịta ogologo oge na China.
Auto ladler maka oyi ụlọ anwụ nkedo igwe
1. Na ise linkages, ejima gia chụpụrụ iji welie ogwe aka ọsọ na nkwụsi ike, ọ na-amụba mmepụta mmepụta.
2. Ikpe bụ mono-block; ọ na-abawanye nkenke nke igwe.
3. A na-achịkwa ogwe aka na-aga n'ihu / nlọghachi na ịwụsa / scooping iche iche site na inverters, si otú ahụ na-amụba ọsọ ladle, dị mfe ịrụ ọrụ.
Auto Extractor maka oyi ụlọ anwụ nkedo igwe
1. Enwere ike iji ya mee ihe n'onwe ya ma ọ bụ interface na igwe nkedo anwụ, sprayer, ladler na press machine na-emepụta mmepụta akpaaka zuru oke.
2. Igwe moto na-anya ya, wepụta mpempe ọrụ n'ọsọ dị elu, yana na-eguzo, na-ebelata okirikiri nkedo nke ọma.
Ngwakọta akpaaka onye ntọhapụ maka igwe oyi akwa anwụ
1. Ngwa nke ihe nlereanya a dị obosara, enwere ike iji ya mee ihe maka ịgwakọta n'ozuzu na onye na-ahapụ ihe pụrụ iche, nhazi ahụ dị mfe, ma dị mfe ịnọgide na-enwe.
2. Ihe nlereanya a nwere njikwa ọkwa mmiri zuru oke nke na-eji mmiri mmiri dosing cylinder, mgbe ị na-agwakọta, usoro onunu ogwu.
Ihe na-ekesa beads maka igwe oyi akwa anwụ
1. Dị mfe iji rụọ ọrụ, adaba na loading raw material.
2. Ịdọ aka ná ntị na-akpaghị aka mgbe ihe efu.
3. Enwere ike gbanwee olu nri dị ka achọrọ.
4. Ọdabara maka ma nnukwu na obere granules.
5. Nwere ike na-ahọrọ na-eri nri ọ bụla anwụ nso okirikiri ma ọ bụ mgbe multiple cycles, ịzọpụta na plunger mmanu na-eri.
6. Igwe na-enye nri ziri ezi, siri ike na ọnụ ala ọdịda.
Plunger Lubricant Drip Machine maka igwe oyi akwa anwụ
1. mma mmanu mmanu, na-eri nke lubrication bụ ọkara nke ndị ọzọ lubrication ụzọ.
2. Obere mmanu mmanu, obere gas evolushọn, na-ebelata nke ọma n'ime porosity nke nkedo (karịsịa hydrogen stomata).
Integrated servo auto extractor & sprayer for hot chamber die die machine for 25T-300T Hot Chamber Die Casting Machine
1. Ngwa eletriki na-ebubata na ihe pneumatic, mma kwụsiri ike, na-adịgide adịgide iji.
2. Tebụl na-amị amị nakweere ụzọ ụgbọ okporo ígwè na-amị amị dị elu, kwụsiri ike, arụmọrụ dị elu.
Ihe na-ekesa Shot Beads bụ nke kachasị ngwaọrụ mmanye mmanye nke a na-eji mmanye isi na aka uwe, nke nwere ike mmanye nke ọma n'akụkụ akụkụ nke ọrụ ahụ. Gbatịkwuo ndụ ọrụ ya ma melite arụmọrụ mmepụta.
Ngwa a na-achọ ihe ndị pụrụ iche lubricating, nke bụ ihe oriri. Anyị nwekwara ike ịnye ahụ mmanu mmanu mmanu iji gboo mkpa mmepụta gị.